Daraasad: Hadaad jeceshahay helista DAHAB, Quraanjada raadkeeda raac.! - iftineducation.com
iftineducation.com – Daraasad cilmi baaris ah oo ay ka sameeyeen aqooyahano ka tirsan Common wealth dalka Austareliya ayaa cadaysay in quraanjada cad-cad ay dadka ku hagi karto goobaha laga helo Dahabka iyo macdanta kale ee qaaliga ah.
Warbxin lagu qoray wargeyska Science Daily ayaa lagu cadeeyay in quraanjada godadkeeda laga helay dahab iyo goobo kale oo u dhow.
Dr.Aron Stewart oo ka tirsan cilmi baadhayaasha common wealth ee dhinaca sayniska iyo warshadaha ayaa sheegay in cayayaankaasi yar u isticmaaleen in ay ku soo ururiyaan dahabka iyo macadano kale . Taasi oo fudaydaysay helista macadanno ay adag tahay in la helo.
Alloow u gargaar wiilashaan dulmi ayaa loogu Geestay gudaha xabsiga yukreen Daawo silica wiilasha soomaaliyeed